Umahluko phakathi kwe-Analog kunye ne-Digital Electronics
Zonke izinto ze-elektroniki zingahlulwa zibe ngamacandelo amabini abanzi: i-analog kunye nedijithali. Omnye wemizekelo eqhelekileyo yomahluko phakathi kwezixhobo ze-analog kunye nezedijithali yiwotshi. Kwiwotshi ye-analog, ixesha limelwe zizandla ezijikeleza ukudayala kwaye zalatha kwindawo ekucofe kuyo emele ixesha eliqikelelweyo. Kwiwotshi yedijithali, isibonisi senani sibonisa elona xesha lichanekileyo.
Analog ibhekisa kwimijikelezo apho izixa ezinje ngevolthi okanye zangoku ziyahluka ngokwenzeka ngokuqhubekayo. Xa uvula ucofo lwe-potentiometer, umzekelo, utshintsha ukuxhathisa ngenqanaba eliqhubekayo lokutshintsha. Ukuxhathisa kwe-potentiometer kunokuba naliphi na ixabiso phakathi kobona buncinci kunye nobona bukhulu buvunyelwe yimbiza.
Ukuba wenza isahluli sevolthi ngokubeka isichasana esisigxina kuthotho kunye ne-potentiometer, i-voltage kwinqanaba eliphakathi kwesixhathisi esisigxina kunye ne-potentiometer inyuka okanye yehle ngokutyibilikayo njengoko ujika iqhosha kwi-potentiometer.
Kwi yedijithali elektroniki, izixa zibaliwe endaweni yokulinganisa. Kukho umahluko obalulekileyo phakathi kokubala nokulinganisa. Xa u bala into, ufumana isiphumo ngqo. Xa u umlinganiso into, ufumana iziphumo ezisondeleyo.
Cinga iresiphi yekhekhe efuna iikomityi ezimbini zomgubo, 1 indebe yobisi, kunye namaqanda ama-2. Ukufumana iikomityi ezi-2 zomgubo, uthabatha umgubo kwikomityi yokulinganisa indebe e-1, uthele umgubo kwisitya, emva koko uphinde uphinde. Ukufumana ikomityi yobisi, ugalela ubisi kwikomityi yokulinganisa engamanzi de ibe ngaphezulu kweelayini zobisi kunye nomgca we-1-indebe eprintwe kwikomityi yokulinganisa emva koko uthele ubisi kwisitya sokuxuba. Ukufumana amaqanda ama-2, ubale amaqanda ama-2, uwaqhekeze, kwaye uwafake kwisitya sokuxuba.
Imilinganiselo yomgubo kunye nobisi kule recipe iyaqikelelwa. I-teaspoon kakhulu okanye incinci kakhulu ayinakuchaphazela isiphumo. Kodwa amaqanda abalwa ngokuchanekileyo: ngokuchanekileyo 2. Hayi u-3, hayi u-1, hayi u-11/2, kodwa u-2. Awunakuba netispuni yamaqanda amaninzi okanye ambalwa kakhulu. Kuza kubakho amaqanda ama-2 ngokuchanekileyo, kuba uyawabala.
Ke yeyiphi echanekileyo - i-analog okanye idijithali? Ngenye indlela, iisekethe zedijithali zichanekile ngakumbi kuba zibala ngokuchaneka ngokupheleleyo. Unokubala ngokuchanekileyo inani leembotyi zejeli engqayini, umzekelo.
Kodwa ukuba ulinganisa ingqayi ngokuyibeka kwisikali se-analog, ukufunda kwakho kunokuba yinto engacacanga kuba awunakuhlala ugweba indawo ngqo yenaliti. Yithi inaliti kwisikali imalunga nesiqingatha phakathi kweepawundi ezi-4 kunye neepawundi ezi-5. Ngaba ingqayi inesisindo esiyi-4.5 yeepawundi okanye i-4.6 yeepawundi? Awunakutsho ngokuqinisekileyo, ke uhlala malunga nama-4.5 eepawundi.
Kwelinye icala, iisekethe zedijithali zilinganiselwe ngokwendalo ngokuchaneka kwazo kuba kufuneka zibala kwiiyunithi ezisisigxina. Uninzi lweethemometha zedijithali, umzekelo, zinedijithi enye kuphela ekunene kwenqaku lokugqibela. Ke, banokubonisa ubushushu be-98.6 okanye i-98.7 kodwa abakwazi ukubonisa u-98.65.
Nazi ezinye zeengcinga onokucinga ngazo malunga nokwahluka phakathi kwenkqubo yedijithali kunye ne-analog:
kangakanani penicillin ukunika inja
Ukuthi inkqubo yedijithali ayifani nokuthi yinto yokubini. UBhanari luhlobo oluthile lwenkqubo yedijithali apho ubalo lwenziwa lonke ngenkqubo yeenambambili. Phantse zonke iinkqubo zedijithali nazo ziinkqubo zebhanari, kodwa amagama amabini awatshintshi.
Iinkqubo ezininzi ziyindibaniselwano yeenkqubo zokubini kunye nezeanalog. Kwinkqubo edibanisa amaxabiso kunye nexabiso leanalog, isekethe ekhethekileyo iyafuneka ukuguqula ukusuka kwi-analog iye kwidijithali, okanye ngokuchaseneyo. Umbane wokufaka (i-analog) unokuguqulwa ulandelelanise iipulse, enye yevolthi nganye; emva koko iimpundu zinokubalwa ukumisela umbane.
ihydroxyzine hcl 25mg iithebhu
Imiphumo emibi ye-ortho
idosi ephezulu ye-seroquel
ipilisi ye-azithromycin usp 250 mg
Valtrex idosi yamadyungudyungu omkhuhlane